तपाइलाई फिस्टुलाका लक्षणहरु त देखा परेकाे छैन ? के हो फिस्टुला, यसकाे उपचार बारे जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
फिस्टुलाका केही प्रकारहरु हुन्छन् । तर, यसका सबैभन्दा प्रचलित प्रकार हो एनल फिस्टुला । एनल फिस्टुला एउटा सानो नली समान हुन्छ । जुन आन्द्राको अन्त्यको भागलाई गुद्वारको नजिकैको छालासँग जोडिदिन्छ । फिस्टुला, अंगहरु अथवा नशाहरुको बीच हुने एक असमान्य जोड हो । यसले त्यस्ता दुई अंगहरु अथवा नशाहरुलाई जोडिदिन्छ । जुन प्राकृतिक रुपले जोडिएका हुन्नन् । जस्तो आन्द्रा अथवा छालाको बीचमा, योनी तथा मलाशयको बीचमा फिस्टुला हुने सम्भावना हुन्छ ।
यो साधारणतया त्यो बेला हुन्छ, जब कुनै संक्रमण सही तरिकाले ठिक भएको हुँदैन । अधिकांश एनल फिस्टुला तपाईको गुद्द्वारको नलीमा पीप जम्मा भएर हुन्छ । उक्त पीप छालाबाट आफैं पनि बाहिर निस्कन्छ अथवा यसका लागि शल्यक्रियाको आवश्यकता पनि पर्न सक्दछ । एनल फिस्टुला त्यो बेला हुन्छ । जब पीप छालाबाट बाहिर आउनका लागि बनाइएको बाटो खुल्लै हुन्छ अथवा त्यो राम्ररी ठिक भएको हुँदैन ।
यसको लक्षणहरुमा दुःखाई, सुजन, सामान्य रुपमा दिसामा देखिने परिवर्तन तथा गुद्वारमा हुने रक्तश्राप आदि हुन् । यसको परीक्षणका लागि डाक्टरले तपाईको एउटा शारीरिक परीक्षण गर्दछन्, जसमा तपाईको गुद्वार तथा आसपासको क्षेत्रमा फिस्टुलाको परीक्षण गरिन्छ । फिस्टुलाको उपचारका लागि शल्यक्रिया समेत गर्न सकिन्छ । जसमा संक्रमित ठाउँबाट पीपलाई बाहिर निकालिन्छ ।
फिस्टुलालाई निम्न लिखित आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
सामान्य तथा जटिल
एक अथवा एकभन्दा बढी फिस्टुला भएकोलाई सामान्य अथवा जटिल फिस्टुलाको रुपमा वर्गीकृत गरिन्छ ।
कम अथवा बढी
फिस्टुला भएको ठाउँ तथा मांशपेशीहरु (गुद्वारलाई खोल्ने र बन्द गर्ने मांशपेशी) को दुरीका आधारमा यसलाई कम अथवा बढी भनेर वर्गीकृत गरिन्छ ।
फिस्टुलाका निम्न लिखित लक्षणहरु हुन सक्छन्
गुद्वारमा पटक-पटक फोका आउनु
गुद्वारका वरपर दुख्नु अथवा सुजन हुनु
दिसा गर्दा दुख्नु ।
गुद्वारको छेउबाट गन्हाउने रगत मिसिएको पीप आउनु (पीप निस्किएपछि दुखाई कम हुनसक्छ)
पटक-पटक पीप निस्किन थालेपछि गुद्वारको वरपरको छालामा जलन हुनु ।
ज्वरो, चिसो लाग्नु अथवा थकान महसुस हुनु ।
कब्जियत हुनु ।
सुजन हुनु आदि ।
यदि तपाईलाई पनि यीमध्ये कुनै लक्षण देखिए भने तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ ।
फिस्टुलाको कारण तथा चुनौतीहरु
अधिकांश फिस्टुला गुद्वारमा फोका भएपछि हुनेगर्छ । यो त्यो बेला हुनसक्छ, जब फोकाबाट पीप निस्किएपछि त्यो ठिक हुँदैन । के अनुमान लगाइन्छ भने हरेक दुईदेखि चार व्यक्ति, जसलाई गुद्वारमा फोका आउँछ, तीनलाई फिस्टुला हुन्छ ।
यसका केही असामान्य कारणहरु यसप्रकार छन्
एउटा लामो समयदेखि चलिरहेको एउटा त्यस्तो रोग, जसमा पाचनतन्त्रमा सुजन हुन्छ ।
गुद्वारको छेउछाउको छालामा फोका आउनु तथा दाग बस्नु ।
क्षयरोग अथवा एचआईभी संक्रमित हुनु ।
गुद्वारको नजिक गरिएको कुनै शल्यक्रियाको जटिलता ।
फिस्टुलाका कारक तत्वहरु
फिस्टुलाको निम्न लिखित कारक तत्वहरु हुन सक्छन्
गुद्वारमा विगतमै चोट लाग्नु
विगतमा गुद्वारको वरपरको क्षेत्रमा रेडिएसन थेरापी गरिनु ।
फिस्टुलाबट कसरी बच्ने ?
यदि तपाईलाई एक पटक फिस्टुला भएको छ भने निम्न लिखित तरिकाबाट भविष्यमा यसबाट बच्नुहुनेछ ।
यदि तपाईलाई कब्जियत छ, कडा दिशा आउँछ भने तपाईलाई फिस्टुला हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । तपाईले खानपिनमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर लिनुपर्छ । खासगरी फलफूल तथा सब्जिहरुको सेवनले तपाई कब्जियतबाट बच्न सक्नुहुनेछ ।
जबसम्म तपाईलाई मुलायम तथा पहिलाकोभन्दा बढी दिसा आउन कम हुन्छ । त्यो बेलासम्म फाइबरको सेवनलाई बिस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्छ । साथै प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । जसबाट पेटमा सुजन अथवा ग्याष्ट्रिक नहोस् ।
तरल पदार्थको अत्यधिक सेवनले कब्जियतबाट बच्न सकिन्छ । किनभने यसले दिशालाई नरम बनाउँछ र दिसा गर्नपनि सजिलो हुन्छ । गर्मीको मौसममा तथा अत्यधिक शारीरिक गतिविधिहरु गरेपछि अत्यधिक तरल पदार्थ पिउनुपर्छ । अधिक मात्रामा मदिरा तथा कफी पिउनाले शरीरमा पानी कम हुन सक्छ ।
कब्जियत हुने सबैभन्दा सामान्य कारण भनेको कम शारीरिक गतिविधिहरु हुनु पनि हो । हरेक दिन कमसेकम तीस मिनेटसम्म व्यायाम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जसले तपाईको पाचन प्रणाली राम्रो हुनेछ र तपाईफिट रहनुहुनेछ ।
दिसालाई लामो समयसम्म नरोकौ
जब तपाईलाई दिशा गर्न मन लाग्छ । त्यही बेला नै दिशा गर्नुपर्छ । यदि त्यही बेला दिशा गर्नुभएन भने भविष्यमा त्यस्तो मन लाग्ने सम्भावना घट्नसक्छ । तपाईले दिशालाई जति लामो समयसम्म रोक्नु हुनेछ । त्यो त्यत्ति नै सुख्खा तथा कडा हुने सम्भावना हुन्छ । जसबाट दिशा गर्न गाह्रो समेत हुन्छ ।
निम्नलिखित तरिकाहरुले कब्जियतको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ र गुद्वारको नलीको तनावलाई कम गर्न सकिन्छ ।
१. ट्वाइलेटमा दिशा गर्नका लागि प्रशस्त समय लिने तर धेरै समयसम्म ट्वाइलेटमा बसिरहनु पनि हुँदैन ।
२. दिशा गर्नका लागि धेरै बल नगर्ने ।
३. गुद्वारको क्षेत्रलाई सुख्खा राख्ने ।
४. हरेक पटक दिशा गरेपछि आफूलाई राम्ररी सफा गर्ने ।
५. नरम खालको ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्ने ।
फिस्टुलाका लागि शल्यक्रियाकै आवश्यकता पर्दछ । यसलाई औषधिले ठिक पार्न सकिँदैन ।
एउटा सामान्य फिस्टुलाका लागि चिकित्सकले फिस्टुलाको नलीको छाला तथा वरपरको माशंपेशीहरुमा एउटा चीरा बनाएर घाउ भर्ने काम गर्छन् । सामान्य फिस्टुलालाई गुद्वारको मांशपेशीलाई हानि नपुर्‍याई ठिक बनाउन सकिन्छ भने जटिल फिस्टुलालाई ठिक गर्ने क्रममा जोखिम समेत बढ्छ ।
यदि स्थित जटिल छ भने फिस्टुलाको उपचारका लागि चिकित्सकले त्यसको प्वालमा एउटा ट्यूब हाल्छन् । त्यसलाई सेटन भनिन्छ र त्यो एउटा रबरको हुन्छ । सेटलले संक्रमित तरल पदार्थलाई सोस्ने काम गर्छ । यसका लागि छ हप्ता अथवा त्योभन्दा बढी समय लाग्नसक्छ ।
फिस्टुलाको स्थानको आधारमा चिकित्सकले तपाईको गुदद्वारको मांशपेशीलाई काट्न सक्दछन् । चिकित्सकहरुले उक्त मांशपेशीलाई हानि नपुर्‍याउने कोसिस समेत गर्छन् । यद्यपि, शल्यक्रियापछि दिशालाई नियन्त्रित गर्नमा कठिनाई हुनसक्छ ।
फिस्टुलाको शल्यक्रियापछि बिरामीको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।
फिस्टुलाको शल्यक्रियापछि चिकित्सकद्वारा भनिएको पेन किलर तथा एन्टिबायोटिक्स औषधि सेवन गर्नुपर्छ । आफ्नो खुशीले औषधि पसलमा गएर औषधि किन्नु हुँदैन ।
दिनमा तीनदेखि चार पटक तातो पानीले नुहाउनुपर्छ ।
फिस्टुला ठिक हुने बेलासम्म आफ्नो गुद्वारमा प्याड लगाउनुपर्छ ।
चिकित्सकले भने पछि मात्र आफ्नो दैनिक जनजीवनका कामहरु गर्नुपर्छ ।
फाइबरयुक्त खानेकुरा र प्रसस्त मात्रामा तरल पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ ।
हामीले काेहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
कब्जियत (constipation) भनेको के हो?
गलत खानपान, वोसोयुक्त खानेकुराको सेवन तथा पानीको कम सेवनका कारण कब्जियतको समस्या हुने गर्छ । कब्जियत भएमा पेट सफा हुँदैन र पेटको फोहर बाहिर निस्कदा मलद्वारमा पिडा हुने गर्दछ । धेरैले कब्जियतलाई सामान्य रुपम लिन्छन् तर समयमै उपचार नगरेको अवस्थामा आन्द्रा सम्बन्धी गम्भीर समस्या निम्त्याउने भएकाले समयमै सर्तक हुन जरुरी छ ।
बेलुकी खाना खाने वित्तिकै सुत्नु हुँदैन । खाना खाएको करिब एक–डेढ घण्टापछि मात्र सुत्नु पर्छ । खाना खाने वित्तिकै सुत्नाले खाना पच्न ढिलो हुन्छ ।
बिहान ढिला उठेमा पनि पचेर बाहिर निश्कासन हुन तयार भएको मल निस्कासन हुन पाउँदैन त्यसैले बेलुकी दस बजे र बिहान पाँच बजे उठ्नु उत्तम हुन्छ ।
५. मल त्यागको समयमा मनलाई पूर्ण रूपमा मल त्याग गर्नमा नै लगाऔं। शौचालयमा बसेर अखबार पढ्ने, गीतसंगीत सुन्ने तथा अन्य विषय सोच्ने गर्दा मस्तिष्कले मल त्याग सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित अंगहरूलाई दिने बिलम्ब गर्ने हुुँदा कब्जियत हुने सम्भावना रहन्छ।
अंगहरूमा विषाक्त बढ्न गई महत्वूर्ण अंगहरूको कार्य क्षमतामा कमी आउँदा अनेक रोग देखिन सक्छ। पूर्वीय स्वास्थ्य विज्ञानहरूको मत अनुसार कब्जियतको कारणले उच्च तथा निम्न रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, ग्यास्ट्रि्रक, अल्सर, आन्द्रा तथा पेटको क्यान्सर, इरिटेबल बवेल सिन्ड्राम, एसिडीटी, एपेन्डीसाइटिस, अपच, गुदद्वार खस्नु, डकार आउनु, चाया, पोतो, डन्डीफोर, आउनु, जोर्नी दुख्नु, हड्डी खिइनु, सुन्निएर विकृत हुनु जस्ता समस्या आउँछ।
मानसिक समस्या जस्तै
डर, चिन्ता, खिन्नता, उदासिनता, अनिद्रा, यौनशक्तिको क्षय, प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्यक्षमता गडबड हुनु, सर्दीले सताइ रहनु, ज्वरो, खोकी बल्भि्करहनु, मांसपेसी तथा नसा-नाडीहरु कमजोर हुनु, अन्तश्रावी ग्रन्थीहरुको कार्य सुचारु नभएर हार्मोनको मात्रा घटवड भइरहनु लगायत समस्या पनि आउँछ ।
Don't Miss it मारिया सारापोभाका प्रेरणादायी भनाईहरु
Up Next गाईको दुधमा कस्तो पोषक तत्व पाइन्छ ? कति लाभदायक हुन्छ ?